Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọhụrụ okomoko: Tasman mara ọkwa Australia mpụta mbụ
Nchịkọta okomoko, akụkụ nke Pọtụfoliyo Marriott Bonvoy nke ụdị 30 pụrụ iche, na-ekwupụta mpụta mbụ Australia nke The Luxury Collection brand na mmeghe nke Tasman na-abịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ Luxury Collection, Hobart na Disemba 9, 2021.
Mmeghe a ga-akpọ ndị njem na ndị nyocha na Hobart maka ahụmịhe mgbanwe sitere n'ọdịbendị pụrụ iche nke steeti agwaetiti Australia. N'ịbụ nke dị na etiti akụkọ ihe mere eme nke Hobart, Tasman ga-adị na Salamanca Ebe nwere ọmarịcha ihu na Murray Street, dị nnọọ steepụ site na ahịa Salamanca ama ama, St David's Park na mmiri dị egwu nke Sullivan's Cove. Ọbịbịa nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ a na-atụ anya nke ọma na-ekwe nkwa iweta àgwà obodo bara ọgaranya nke obodo ahụ, na-ejikọta oge ịsụ ụzọ obodo ahụ na omenala nke oge a na-adọrọ adọrọ.
Na-enye ahụmịhe ụlọ pụrụ iche nke jikọtara ihe nketa akụkọ ihe mere eme nke saịtị ahụ na ọhụụ ọgbara ọhụrụ dị egwu, ndị ọbịa nke Tasman ga-enwe ohere dị ụkọ iji nweta oge atọ dị iche iche nke imewe n'ime ụlọ nkwari akụ nke nwere ọnụ ụlọ 152 nke ndị omenkà Australia na-emeri emeri FJMT na ime ụlọ jikọtara ọnụ. nke Joseph Pang Design dere. Mkpokọta ụlọ ndị mebere Tasman gụnyere ụlọ mbụ nke 1840s Heritage Building, Art Deco Building malitere na 1940s, na nke dị ugbu a, iko nwere ụlọ Pavilion.
Emebere ụlọ ndị ọbịa na ọnụ ụlọ ndị ọbịa ka ha gosipụta ọmarịcha akụkọ ụkpụrụ ụlọ nke ihe onwunwe yana nkọwa njiri mara nke na-egosipụta oge ọ bụla nke imewe na ahụmịhe enweghị nkebi. Site na nkọwa ihe nketa eweghachitere nke ọma dị ka mgbidi aja aja awara awara na ebe ọkụ gas nketa, na nkọwapụta osisi Tasmania Sassafras nke obodo, ọnụ ụlọ ndị ọbịa na ọnụ ụlọ ọ bụla na-ejikọta ọdịbendị Hobart ma na-elepụ anya obodo panoramic.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ga-enwe echiche iri nri atọ dị iche iche, gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ mbinye aka, Peppina, nke onye Tasmania a ma ama bụ Massimo Mele kere. Ụlọ mmanya Cocktail na ọbá akwụkwọ mmụọ, Mary Mary, ga-enye ahụmịhe mmanya ochie nke ụwa echegharịrị maka oge a. Deco Lounge na-enye oghere a nụchara anụcha iji nwee mmasị na ahụmịhe mbinye aka High Tea na ebe obibi nke na-asọpụta na mbara ala na-ele anya n'Ụlọ Nzukọ Omeiwu.
Ndị ọbịa ga-enwe obi ike ịchọpụta ahụmahụ ndị epicurean Tasmania ga-enye, na-ewepụta akụkọ ndị dị n'azụ ihe ọkụkụ a na-eme ememe na ịgagharị ọzara na-enweghị atụ nke agwaetiti ahụ. A Clefs d'Or concierge ga-egosipụta nleta pụrụ iche nke ndị na-emepụta ihe na agwaetiti ahụ, yana oge epicurean ga-enwe n'ime ụlọ nkwari akụ ahụ, gụnyere mkpụrụ osisi apple brandi, ụlọ nke agbagoro n'ụgbọ mmiri na-arụkọ ọrụ ọnụ, nke a na-akwado n'ime oghere akụkọ ihe mere eme na-adọrọ adọrọ. chọpụtara na Tasman.